प्रदेश सभा सदस्यहरुको आरोप– विचौलियाको हितमा बजेट आयो « Anumodan National Daily
प्रदेश सभा सदस्यहरुको आरोप– विचौलियाको हितमा बजेट आयो
प्रकाशित मिति : ९ असार २०७८, बुधबार १९:२२
सुधार भएन भने बजेट पास हुन दिन्नौ– काँग्रेस
मन्दीरको योजना किन परेनन् ?– सत्तापक्षीय सांसद
धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सत्तापक्ष तथा प्रतिपक्षी दलका नेताहरुले प्रदेश सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेट विचौलियाको हितमा ल्याइएको आरोप लगाएका छन् ।
प्रदेश सभाको मंगलबारको बैठकमा बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिएका प्रतिपक्ष तथा सत्तापक्षीय सांसदहरुले विचौलियाहरुले झ्यालबाट छिराएका अधिकांस योजनाहरु नै बजेटमा समावेश भएको आरोप लगाए । प्रदेश सांसदहरुले जनताका प्रतिनिधिहरुले दिएका सुझाव तथा योजनाहरुलाई बजेटमा वेवास्ता गरिएको पनि आरोप लगाए ।
छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसद् भरतबहादुर खड्काले योजना र बजेट नसच्याएमा बजेट पारित गर्न कठिन हुने बताए । ‘यो रातो किताब बजेट नै होइन’ उनले भने– यो त विचौलियाहरुलाई राखेर बनाएको बजेट हो । यस्तोमा के छलफल गर्ने ? सरकारले यही बजेटलाई पारित गराउन खोज्छ भने कांग्रेसले स्वीकार गर्न सक्दैन ।
सांसद खड्काले आफूले जनताको माग अनुसार दिएका योजनाहरु बजेटमा नपरेकोमा गुनासो गरे । उनले भने– मेलै चार वटा मन्दिरको योजना पठाएको थिए, एउटा पनि परेन । कही एकै ठाउँमा १० मन्दिरका योजना छन् । करोडौंको बजेट हालिएको छ ।
सांसद खड्काले योजना र बजेटको सन्तुलन मिलाउन अधिकारसम्पन्न संसदीय समिति बनाउन सभामुखसंग माग गरे । ‘यदि संसदीय समिति बनाएर योजना र बजेटको सन्तुलन मिलाइएन भने कांग्रेसले यसको व्यापक रुपमा पर्दाफास गर्नेछ’ उनले चेतावनीको शैलीमा भने– आर्थिक वर्षको शुरुवातबाट नै योजना बेचेर खाने प्रवृत्तिको शुरुवात भएको छ । यो वर्षको बजेट टेलर मात्रै जस्तो हो । अर्को बर्ष बजेटमा धाँधली हुन्छ । यो बजेटले दुई चार जनाको स्वार्थ त पुरा गर्ला, सुदूरपश्चिम प्रदेशका जनताको हित गर्दैन ।
छलफलमा भाग लिँदै सत्तापक्ष नेकपा एमालेका सांसद् तथा पूर्व सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले बजेट निकै असन्तुलित रहेको दाबी गरे । उनले भने– दार्चुलामा मन्दिर नै मन्दिरका दर्जनौ योजना छन् । मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा पनि मन्दिरको योजना परेन । उनले प्रश्न गरे– नालीसहितको पाँच सय मिटर सडक १० लाख रुपैयाँमा कालोपत्रे हुँदैन । मेरो छिमेकमा यस्तै योजना परेको छ । योजना सुधार गर्नुपर्छ । सरकारले सिलिङमा फरक नपर्ने गरी योजनाहरु सच्याउन पर्छै ।
पूर्वमन्त्री सुवेदीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा धेरै योजनाहरु परेको भए पनि बजेटप्रति आफू सन्तुष्ट नरहेको बताए । ‘मैले ३८ वटा योजनाहरु लिएर आएको थिएँ’ उनले भने– पूर्वाधार विकास मन्त्रीले भनेपछि मैले २८ वटा योजना दिएको थिए । अहिले १३३ वटा योजना परेका छन् । यो कहाँबाट आयो ? कतै यी योजनाहरु सेटिङबाट त आएका होइनन् ?
सत्तापक्ष नेकपा एमालेका सांसद् बलबहादुर सोडारीले झ्यालबाट योजना हालिएको भन्दै आपत्ति जनाए । उनले भने– बजेटमा झ्यालबाट आएका योजनाहरुमा परेका छन् । मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा २० लाख रुपैयाँको स्वास्थ्य चौकी भवन बनाउने योजना परेको छ । स्वास्थ्य चौकीको भवन २० लाख रुपैयाँमा बन्दैन । त्यसलाई बर्थिङ सेन्टरमा बदल्नुपर्छ ।
सांसद सोडारीले पनि आफूले दिएको योजनाहरु भन्दा धेरै योजना भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको बजेटमा परेको बताए । ‘सडकका सात लाख रुपैयाका योजना छन्, १० लाख रुपैयाँका योजना छन्’ उनले भने– यी सबै झ्यालबाट छिराइएका योजनाहरु हुन् । सिंचाई पोखरीका योजनामा पाँच लाख बजेट मागेको थिए, तीन लाख परेको छ । तीन लाख रुपैयामा पहाडमा पोखरी बन्दैन । तराईका पोखरीमा १० लाख रुपैया परेका छन् । योजनाको नाम पनि विग्रेका छन् । नाम बिग्रेका योजनाको नाम पछि सच्याउन नमिल्ने भनेर योजनाहरु फ्रिज गए ।
सत्तारुढ नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक दुर्गा विकले कम्युनिष्ट सरकारले अब मन्दिर बनाउँदैन भनेको भए पनि अछाममा ५० लाख रुपैयाँको मन्दिरको योजनाहरु परेको भन्दै प्रश्न गरिन् । ‘पहिले पनि मन्दिर बनाउन कम्युनिष्ट सरकारले बजेट खर्च गर्दैन भनेको थियो’ उनले प्रश्न गरिन्–अहिले मन्दिरका योजनामा बजेट परेको छ । यो के हो ? यसलाई सरकारले प्रष्ट्याउनै पर्छ ।
उनले तराई र पहाडका योजनामा प्रदेश सरकारले विभेद गरेर बजेट विनियोजन गरेको आरोप लगाइन् । ‘तराईमा बन्ने सहकारी भवन २० लाख रुपैयामा र पहाडमा बन्ने सहकारीको भवनमा १० लाख बजेट छ्ट्याइएको छ’ उनले पुन: प्रश्न गरिन्– यो कसरी भयो ? सरिया सिमेन्ट तराईंबाटै बोकेर लग्नुपर्छ । यस्ता विषयमा पुनर्विचार गरिनुपर्छ ।
सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद शान्ति नेपालीले कृषि र सामाजिक विकास क्षेत्रमा बजेट कम दिएको भन्दै आपत्ति गरिन् । ‘कृषितिर बजेट कम भएको छ’ उनले भनिन्– अहिले बेरोजगार भएका मानिसहरुलाई कृषितिर लगाउन कृषिमा बजेट दिनुपथ्र्यौ । सामाजिक विकासतिर पनि बजेट बढाउनु पर्दथ्यो, तर गरिएन ।
नेकपा एमालेका सांसद् कुलविर चौधरीले प्रदेश सरकारको बजेटप्रति व्यंग्य प्रहार गरे । ‘यो वर्षको रातो किताव देखेर मेरो आँखाबाट खुशीको आँशु झर्यौ, नयाँ योजनाहरु नथप्ने, तर झ्यालबाट छिरेका योजनाहरु समेटिएका छन्,’ उनले भने– यो वर्ष मेरो क्षेत्रमा योजनाहरु धेरै परेका छन् । यसमा म खुशी हुनु पथ्र्यौ । अहिलेका योजनामा एक लाखदेखि ५० लाख रुपैयाँसम्म बजेट परेको छ । पहिले दुई लाख रुपैयाका योजना पर्ने गरेका थिए । त्यही भएर मेरो आँखाबाट खुशीको आँसु झरेको छ । बजेट तलमाथि पारेको देखेको हुनाले मलाई खुशी लागेको छ । त्यही खुशीले मेरो आँखाबाट आँशु झर्यौ । पहिलो वर्षदेखि न कार्यान्वयन भएको छ, न छोड्छ ।’
उनले अबका दिनमा योजना सम्पन्न गर्दै रातो किताबमा नयाँ योजना अटाउने ठाउँ बनाउन माग गरे । ‘पुरानो योजना रातो किताबमा रहिरहने, किताब मोटाउँदै गर्ने अब नहोस्’ उनले भने– लामो सयमदेखि पछ्याउँदै आएको योजना सम्पन्न गरियोस् । झ्यालबाट ल्याइएका योजनाहरु सच्याइयोस् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका सचेतक गोविन्द बोहराले सुदू्रपश्चिम प्रदेश देव भूमि रहेको प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत् स्वीकार गरे पनि आफ्नो क्षेत्रको मन्दिर बनाउने योजनामा बजेट नदिएकोमा विरोध गरे । ‘सेटिङमा योजनाहरु ल्याइएका छन्’ उनले भने– प्रतिपक्ष भएकोले हामीले सरकारलाई बाटो देखाएका थियौं । त्यो बाटोमा प्रदेश सरकार लागेन ।
उनले कृषिको बजेटलाई प्राइभेट कम्पनी बनाएर विनियोजन गरिएको आरोप लगाए । ‘प्राइभेट कम्पनीहरुलाई बजेट दिने गरी कृषिको बजेट राखिएको छ,’ सांसद बोहराले भने– विचौलियालाई राखेर बनाएको बजेट कांग्रेसले समर्थन गर्न सक्दैन । यसलाई सुधार गरेर ल्याइयोस् ।
नेपाली कांग्रेसकी सांसद् दिव्येश्वरी शाहले आफ्नो ईज्जतसंग जोडिएको योजनाहरुमा बजेट नपरेको हुनाले आफूले बजेटको समर्थन नगर्ने बताइन् । ‘रातो किताबले सबैलाई निराश बनाएको छ’ उनले भनिन्– कस्तो हचुवा तालले यो बजेट प्रस्तुत गर्नुभयो ? सबैलाई अनौठो लोगेको छ । आफ्नो योजनाहरु दिनुस् भन्नु भयो । हामीले आफै पुगेर सबै मन्त्रालयहरुमा योजना खाममा बन्द गरेर दियौं । पुर्वाधारमा योजनाहरु ४५ लाखको पर्‍यो । कृषिको योजना नै परेन । सामाजिक विकासका योजनामा पनि परेन । म यो बजेटको समर्थन गर्दैन । बजेट मागेको अनुसार आएको छैन भने मैले किन समर्थन गर्ने ? जो योजनासंग मेरो इज्जत जोडिएको थियो । त्यो योजना नपर्दा मैले बजेर्टलाई किन समर्थन गर्नु ?
मंगलबारको बजेटमाथिको छलफलमा सत्तापक्ष नेकपा एमालेका सांसद सुशीला बुढाथोकी र नेपाली कांग्रेसका सांसद् देवराज पाठकले पनि भाग लिएका थिए ।
बजेटमाथि छलफल गर्न प्रदेश सभाको अर्को बैठक आज बुधबार दिउँसो १ बजे बोलाइएको छ ।